कहाँ छन् राजु परियार ? - Nepal News - Latest News from Nepal
कहाँ छन् राजु परियार ?
भाद्र २४, २०७२- एक समय थियो, लोक दोहोरी भन्नासाथ राजु परियारको नाम आउँथ्यो । लोक दोहोरी रेष्टुरेन्ट हुन्, राजमार्गमा कुद्ने गाडी हुन् वा एफएम रेडियो, राजु परियारको स्वरको जादु चलेको थियो ।
‘गर्नु गर्‍यौ बलराम’ जस्ता केही गीतले उनलाई सफलताको शिखरमा पुर्‍याएका थिए । एकै दिनमा १३ वटा गीतसम्म उनले रेकर्ड गरे । ‘एकै दिनमा गीत गाएर डेढ लाखसम्म कमाएको छु,’ उनी सम्झिन्छन् । तर, अहिले खोई राजु परियार ?
हालैको एक दिन लमजुङ सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा राजु परियारलाई देखिए । उनका प्रशंसकले समेत उनलाई हो कि होइन ठम्याउन सकेनन् । ५ वर्ष भयो राजुको नयाँ गीत र समाचार नसुनिएको । निकै दुब्लो भएका राजुको अनुहार पनि कालो पोतोले ढाकेकाले धेरैले चिनेनन् ।
लमजुङ जिविसले गरेको सम्मान कार्यक्रममा उनको नाम लिएर बोलाइएपछि बल्ल मानिसहरुले ठम्याए । जिविसको सम्मान थापेपछि उनले कान्तिपुरसँग आफ्नो जीवनबारे कुराकानी गरे । कुराकानीमा केही व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याले गर्दा आफू पछि परेको बताए पनि उनी त्यसमा खुलेर बोल्न भने चाहेनन् । उनले आफ्नो अवस्था यसरी सुनाए :
‘मैले गाई त पालें तर दुख खान जानिनँ । म सफलताको शिखरमा पुगेको थिएँ । दिनमा १०–१२ वटा गीत रेकर्ड गराउँथे । दोहोरी गीत भन्नासाथ मेरो नाम आउँथ्यो । एकै दिनमा डेढ लाख रुपैयाँसम्म मैले कमाएँ । तर, जोगाउन सकिनँ । अहिले सुकुम्बासी जस्तो भएको छु । मेरो कुनै ब्यांक ब्यालेन्स छैन, एक पैसाको जग्गा पनि छैन ।
सलमानलाई कट्रिनाको न्यास्रो लाग्यो
नायकसँग यस कारण बिहे नगर्ने
चलचित्र क्षेत्रमा संघर्ष गरिरहेका किरण सुन्दरा देवी सन्देश म्यूजिक अवार्डमा मनोनयन ।
इटालीकी एक संगीतकर्मीले विश्वमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक उचाइमा म्युजिक कन्सर्ट गरेर…